Konferansa gvSIG iraisam-pirenena faha-15 - Andro 2 - Geofumadas
Novambra, 2019 GvSIG, fanavaozana
Geofumadas mirakitra ny olona telo andro amin'ny Andro Iraisam-pirenena 15as International gvSIG any Valencia. Tamin'ny andro faharoa dia nizara ho blokma temotra 4 sahala amin'ny andro teo aloha ny fivoriana, nanomboka tamin'ny gvSIG Desktop, izay rehetra mifandraika amin'ny vaovao sy fampidirana ao anaty rafitra dia naseho eto.
Ireo mpandaha-teny ny andiany voalohany, ny solontena rehetra ao amin'ny Association gvSIG, dia namaha olana sahady
Inona no vaovao ao amin'ny gvSIG Desktop 2.5? notanterahin'i Mario Carrera,
Mpanamboatra expression vaovao: mampitombo ny mety ho gvSIG Desktop,
Nahita ny mpanamboatra endrika gvSIG Desktop vaovao,
JasperSoft: ohatra amin'ny fampiasana ny fampidirana ny mpamorona tatitra ao amin'ny gvSIG Desktop by José Olivas.
Manaraka, ny sakan-teheky ara-pinoana dia mifandraika amin'ny fitantanana ny monisipaly, manokatra ity tsingerin'Andriamatoa Álvaro Anguix ity, miaraka amin'ny taratasy Mila ary tombony amin'ny fampiharana IDE eo amin'ny ambaratonga monisipaly, izay nanondro fa imbetsaka ny angon-drakitra momba ny toerana / toerana dia tsy voatery ho mpanohitra mba hamaritana ireo dingana na zava-mitranga sasany, fa, izany dia ampahany lehibe amin'ny angon-drakitra betsaka, izay hanome ny fitantanana anatiny sy tsara kokoa.
"Ny zava-misy hitantsika ao amin'ny mpitantana eto an-toerana, dia ny misy ny fampahalalana, saingy tsy fantatra hoe misy izy, izany hoe, tsy voafintina ary tsy fantatra koa, zara raha zara raha misy ao amin'ny ambaratonga monisipaly. Toy izany koa, misy tranga maro ny fandikana ny fampahalalana, ny kaominina tena manan-danja dia tsy manana drafitra an-dalambe tsy manam-paharoa, fa, ny polisy dia manana iray, ny drafitry ny tanàna dia mampiasa iray hafa, ary izany no fampahalalana momba ny cartografika izay misy ny fampahalalana rehetra tsy misy miavaka ary havaozina ho an'ny rehetra ”Álvaro Anguix.
Ny fanolorana izay nitohy dia ny an'i Eulogio Escribano, izay mampiseho ny fomba hanamaivanana ny olan'ny fandroahana, miaraka amin'ny lohaheviny. AytoSIG. Fotodrafitrasa madiodio ao amin'ireo efitrano kely ao. Ny tanàna kely izay niresahan'i Escribano, dia ireo any amin'ireo faritra ambanivohitra, izay manana renivohitra sy loharanom-pitaovana sahaza azy ireo. Ka inona ilay tolo-kevitra, amin'ny alàlan'ny gvSIG Online, dia nampiditra andiam-piasa maro izy ireo ka ny olona izay tsy maintsy mampita ny vaovao amin'ny vondrom-piarahamonina, dia mila miditra ao anaty rafitra fotsiny ary mampiasa bokotra iray mba hampisehoana ny vaovao rehetra angatahina.
"Azonao jerena ny fampiasana an'ity karazana GIS ity any amin'ireo kaominina lehibe, izay misy olona marobe misahana ny vaovao, fa ny kaominina kely koa dia manana ny olany isan'andro" Eulogio Escribano -AytoSIG
Ity sakana ity dia nifarana tamin'ny fanolorantenan'i Antonio García Benlloch fitantanana ny fotodrafitrasa Tanànan'ny Bétera, ary Vicente Bou an'ny filankevitry ny tanànan'i Onda miaraka amin'i Silvia Marzal UTE Pavapark-Nunsys, izay nanolotra tranga mahomby amin'ny fametrahana IDE tao amin'ny filankevitry ny tanànan'i Onda. Ity tranga farany ity manokana manokana, satria ny filankevitra monisipaly tao Onda teo aloha dia tsy nahomby ny andrana roa hamoronana IDE. Na izany aza, efa fantariny ny maha-zava-dehibe ny fitaovana toa an'ity, dia ilaina ny fanatratrarana ny fampiharana azy, miaraka amin'ireo mpisehatra hafa eo an-toerana, izay hanampy amin'ny fampahalalana ilaina amin'ny famahanana ity SDI ity.
Tamin'ny farany, niahiahy ny mpanatrika sy ny mpandray anjara, izay nilaza raha misy ny mety hisian'ny fanavaozana ara-dalàna na ny fampiroboroboana ny fampiasana anarana manokana ho an'ny rehetra. Saingy tsy fananganana takelaka fotsiny ho an'ny famelabelarana na fitantanana ny angon-drakitra, satria fanamby lehibe ho an'ireo olona tafiditra amin'ity tontolon'ny fitantanana data spatial ity.
Raha asa sarotra izany, ny fahazoana ny hery izay afaka atolotra ny fitaovana toy ny gvSig suite, alao sary an-tsaina fotsiny ny fiezahana hahatratra ny marimaritra iraisana amin'ireo tompon'andraikitra, miaraka amin'ireo manampahefana, miaraka amin'ireo rehetra mandray anjara amin'ity fizotran'ny data ity. raha toa ka hoy i Alvaro Anguix "Misy maodely data amin'izao fotoana izao ary azonao atao ny manandrana an'io aloha, saingy tsy misy afaka manery ny manampahefana - amin'ity tranga ity, ny kaominina - mba hampiasa / hampifanaraka amin'ity maodely data ity."
"Amin'ny farany, asa rehetra tsy misy mandidy ary tsy misy mandoa izany rehetra izany, ary sarotra io, fa manararaotra ny teny hoe" rindrambaiko maimaimpoana sy fiarahamonina ", dia mety ho teboka iray hanombohana toerana handraisana anjara amin'ny fanekena ny torolàlana, na izany aza, amiko tena saro-pantarina hitantanana ny vondrona rehetra ny hevitra ao anaty iray. Izany no mahatonga ny orinasa tsy miankina mamorona nomenclature manokana ary avy eo ireo mpampiasa / teknisiana hafa manatevin-daharana azy. ”Eulogio Escribano - AytoSIG
Amin'ny lafiny iray kosa, somary malina ny tsy fahalalana ny fanangonana data sy ny fanodikodinana, satria imbetsaka ny fampahalalana momba ny spatialized dia nampita sy mamatotra amin'ny tranokala iray, ary avy eo dia averin'izy ireo tanteraka, miaraka amin'ny latabatra toetra iray izay mampatahotra hampiasana azy. . Amin'ity sakana manokana ity, ny fahalemena izay mbola azon'ireo firenena toa an'i Espana amin'ity tranga ity dia hita maso momba ny fitantanana angonin'ireo data spatial sy ny fampiasana fitaovana.
Ilay banga ara-pinoana ilazana ny biodiversity sy ny tontolo iainana, tranga izay nampiasaina angona maimaim-poana - sary satelita maimaim-poana - ary gvSIG ho fitaovana fitantanana data spatial, indrindra ny fampisehoana Tombana ny mari-pana ambonin'ny sary Landsat 5 manan-tantara amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny habakabaka amin'ny fantsona tokana ao amin'ny termal ho an'ny fantsakan'ny renirano Tempisque-Bebedero. Rubén Martínez (University of Costa Rica). Ato amin'ity fandalinana ity, ny fomba fanamafisana ny satelita satelita dia naseho tam-po, ho an'ny fanaraha-maso ireo faritra.
Ny fivoriana farany, natokana ho an'ny Geomatics, dia nanomboka tamin'ny lahatenin'i Antonio Benlloch, izay niresaka momba ny fampiasana GIS nataon'ireo matihanina tany Geomatics, nandinika ny tantara, mampiseho ny fomba nahitana ny paikady lehibe indrindra nampiasa cartografika hahazoana hahazoana Fahombiazana amin'ny asanao. Notohizan'i Benlloch tamin'ny famaritana ny sahan'ny fangatahana omen'ny matihanina geomatics, ny hanohizany hatrany fa tsy natokana ho an'ny famoronana sary ihany izy ireo.
Ny fikambanana gvSIG dia naneho fa mbola mitohy amin'ny filokana amin'ny taranaka vaovao izany, manohana sy manasa ireo mpianatra mamokatra fikarohana manan-danja amin'ireny Andro ireny International. Tao amin'ny andiany Biodiversity sy ny tontolo iainana, naka ilay gorodona ilay mpianatra Ángela Casas ary niresaka ny fampiasana ny gvSIG ho an'ny fitantanana ny tontolo iainana, miaraka amin'ny lohaheviny Mitahiry Micro ny flora ao Sierra del Cid, Petrer (Alicante). Anisany, ny mpianatra Andrés Martínez González, avy ao amin'ny Oniversite Autonomous of Mexico, no nanazava GINI Index Automation ho fitaovana amin'ny kajy statistika geografika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko gvSIG.
Efa andro farany amin'ny federasiona, ny fanatrehan'ireo mpandray anjara izay nisoratra anarana tao amin'ny atrikasa maimaimpoana, toy ny
Fampidirana ho an'ny gvSIG Online sy Thermal Remote Sensing amin'ny gvSIG, izay ahazoany fanamarinana avy amin'ny gvSIG Association.
Manantitrantitra izahay fa efa nanatrika ny kaonferansa fikarohana toy izao isika, ary mendrika ny ekena ny ezaka ataon'ny gvSIG Association hanehoana fa miaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana dia afaka manao sy mitantana ireo karazana rakitra geospatial rehetra. Betsaka ny mifatotra amin'ny rindrambaiko tompondaka amin'izao fotoana izao, noho ny antony tokana tsy navela hijery sy hisava ny tombontsoa rehetra ananan'izany sy ireo hafa tsy manana fahefana; fa koa noho ny fahaizana mivarotra izany eo ambanin'ny fomba mahay mandanjalanja dia midika hoe miala amin'ny toerana mahery vaika ary mifantoka amin'ny fifaninanana.
Previous Post«Previous Konferansa gvSIG iraisam-pirenena faha-15 - andro 1
Next Post Ny Plex.Earth Timeviews dia manome ny sary matihanina AEC farany amin'ny sary misy ao satry ao AutoCADmanaraka »